Horohoron-tany Tany Haïti | Diary 2015
Nandroso ny fitoriana amin’ny teny sinoa
Nahay teny sinoa ny Betelita iray, ka voatendry ho mpisava lalana manokana tamin’ny 2005, mba hitory amin’ireo Sinoa maro be teto amin’ity repoblika ity. Tin Wa Ng no anarany. Teraka teto izy ary teto koa no nihalehibe. Nanorim-ponenana teto Saint-Domingue mantsy ny ray aman-dreniny rehefa niala avy tany Chine.
Niforona teto Saint-Domingue ny fiangonana miteny sinoa mandarin tamin’ny 1 Janoary 2008. Nisy antoko-mpitory niforona koa tao Santiago, tamin’ny 2011. Misy mpitory 70 ao amin’izy ireo, ka anisan’izany ny mpisava lalana maharitra 36 sy mpisava lalana mpanampy maro be. Mitarika fampianarana Baiboly 76 eo ho eo izy ireo, isam-bolana.
Fikarohana olona miteny anglisy
Nisy 27 466 ny mpitory tamin’ny 2007. Nisy 376 ny fiangonana, ary 49 795 ny fampianarana Baiboly. Nampalahelo anefa fa tsy mba nisy ny fiangonana miteny anglisy, nefa be olona niteny anglisy teto. Nasain’ny sampana namorona antoko-mpitory miteny anglisy teto Saint-Domingue àry ny mpivady misionera atao hoe Donald sy Jayne Elwell, tamin’ny Aprily 2008. Vitsy ny mpitory tamin’izany, kanefa nazoto erỳ izy ireo nanadihady hoe aiza avy ireo olona miteny anglisy no mipetraka. Nalamin’izy ireo ny faritany taorian’izay, mba ho vita tsara ny fitoriana.
Nandroso ilay antoko-mpitory teto Saint-Domingue noho ireny ezaka ireny. Lasa fiangonana izy io tamin’ny Jolay 2009, ary 39 ny mpitory tao. Niezahana nampiana koa ireo olona miteny anglisy tany amin’ny faritra hafa. Lasa fito àry ny fiangonana miteny anglisy, tamin’ny Novambra 2011, ary iray ny antoko-mpitory.
Jamba izy sady marenina
Mpisava lalana manokana iray miresaka amin’i Lorys, amin’ny alalan’ny tenin’ny tanan’ny jamba sy marenina
Kamboty mbola kely i Lorys. Voan’ny aretin’i Usher izy, ka marenina hatrany am-bohoka ary nanomboka tsy nahita tsara tamin’izy 16 taona. Mahita kely ihany izy amin’ny antoandro, fa tsy mahita mihitsy rehefa mihamaizina ny andro. Ny tenin’ny tanan’ny jamba sy marenina ihany no ahafahany mifandray amin’ny olona rehefa alina.
Nisy mpivady mpisava lalana manokana nitory tamin’i Lorys, tamin’izy 23 taona. Niray trano tamin’ny lehilahy iray marenina izy tamin’izany, ary niteraka vavikely ry zareo. Herintaona ilay zaza tamin’io ary mandre tsara. Nasain’izy mivady nivory i Lorys. Nandeha tokoa izy ary tiany be ny zavatra nianarany tany.
Vetivety i Lorys dia nanova ny fomba fiainany. Rehefa fantany, ohatra, hoe tsy mety ny manao tokantranomaso, dia nilazany ilay lehilahy niray trano taminy hoe tena ilaina ny misora-panambadiana. Hentitra izy niteny hoe tsy hampandefitra ny fitsipiky ny Baiboly mihitsy. Gaga be ilay lehilahy, ka nanaiky hisoratra taminy.
Lasa mpitory i Lorys rehefa vita ilay fisoratana, ary tsy ela dia natao batisa. Lasa nahay Tenin’ny Tanana Amerikanina koa izy, rehefa niaraka tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Ampianariny Tenin’ny Tanana Amerikanina izao ny zanany vavy sady ampianariny Baiboly.
Horohoron-tany nandravarava an’i Haïti
Daty iray tsy hohadinoin’ny mponin’ny Repoblika Dominikanina sy Haïti ny talata 12 Janoary 2010. Nisy horohoron-tany mantsy tao Haïti tamin’io, ary tsy hay lazaina ny zavatra simba. Tonga dia nasain’ny Filan-kevi-pitantanana nanome vola ho an’ny sampan’i Haïti ny sampana teto, mba hanampiana ny tra-boina. Vola be ilay izy, ka i Evan Batista, dokotera teto amin’ny Betela, no nasaina nanatitra azy. Nahoana? Mirefy iray metatra sy 90 mantsy izy, ary milanja 127 kilao.
Tena nety ny nandefasana ny Rahalahy Batista tany. Mbola teny akaikin’ny sisin-tany mantsy izy no nilazana fa tena nilana dokotera mahay tany Haïti. Nentina tao amin’ny Efitrano Fivoriambe tsy lavitra ny biraon’ny sampan’i Haïti izay naratra mafy. Vao hitan’ny tany Haïti hoe dokoteran’ny sampana tatỳ ny Rahalahy Batista, dia nantsoiny haingana ny tatỳ ary nierany mba havela hijanona any izy. Navela hijanona tokoa izy, ka nahazo fanampiana sahady ireo rahalahy, ora vitsy monja taorian’ny nitrangan’ny loza. Vao santatra am-bava rano ihany anefa izany, raha ny fanampiana no resahina.
Nifanome tanana ireo rahalahy taorian’ilay horohoron-tany tatsy Haïti tamin’ny 2010
Tonga dia niresaka tamin’ireo mpamatsy sakafo ny Sampan-draharahan’ny Fividianana Entana teto amin’ny Betela. Vary sy tsaramaso ary sakafo hafa nilanja 6 800 kilao no novidina dia avy eo nalefa tany Haïti, ny alakamisy 14 Janoary tamin’ny 2.30 maraina. Io angamba no fanampiana tonga voalohany tany Haïti. Niainga avy teto koa ny dokotera telo fanampiny, tamin’io andro io, ary nandeha adiny fito vao tonga tany Haïti. Efa maizina izy ireo no tonga, nefa namantana tany amin’ny toerana nisy an’ireo naratra, ary tsy nijanona niasa raha tsy tamin’ny misasakalina. Dokotera efatra sy mpitsabo mpanampy efatra koa no tonga avy tatỳ, ny ampitson’iny. Tena tsy tomombana ny toerana nanaovana fandidiana, satria efitra fandidiana vonjimaika tao amin’ilay Efitrano Fivoriambe no nampiasaina. Olona 300 mahery no notsaboin’izy 12 mianadahy nandritra ny herinandro.
Nalefa hotsaboina tatỳ izay tena voa mafy, ary nisy foana isan’andro. Ireo fiara nitondra fanampiana nankany Haïti ihany matetika no nitondra marary rehefa niverina, ary nanatitra azy ireny tany amin’ny hopitaly eran’ny Repoblika Dominikanina. Nisy Antokona Mpamangy Marary koa nasain’ny sampana nampahery an’ireo naratra ary nijery raha nahazo sakafo sy fanafody izy ireo. Tsy maintsy nanaraka an’ireo marary tatỳ ny havany, ary ny fiangonana teto no nampiantrano sy nanome sakafo azy ireny.
Nizara fanampiana 450 taonina mahery ny Vavolombelon’i Jehovah, ka anisan’izany ny sakafo be dia be
Hita hoe tena tia olona sy tsy nitandro hasasarana ny vahoakan’i Jehovah, taorian’iny loza iny. Marina mihitsy ilay lazain’ny Ohabolana 17:17 hoe: “Tia amin’ny fotoana rehetra ny tena namana, sady toy ny rahalahy natao hanampy amin’ny fotoam-pahoriana.” Betsaka ny zava-nitranga nampiseho hoe manampy ny mpanompony tsy mivadika foana i Jehovah, na dia ireo efa eo ambavahoanan’ny fahafatesana aza. Ny fanahiny masina sy ireo rahalahy kristianina no ampiasainy amin’izany. Mbola nitohy foana ilay fanampiana nandritra ny volana maro. Nizara fanampiana 450 taonina mahery ny Vavolombelon’i Jehovah, ka anisan’izany ny sakafo be dia be. Rahalahy sy anabavy 78 teo ho eo avy any amin’ny vazan-tany efatra no tonga. Mpitsabo matihanina daholo izy ireo ary nampiasa ny fotoanany sy ny fahaizany maimaim-poana. Nisy mpiasa an-tsitrapo maro be koa nitondra ny anjara birikiny. *
^ feh. 1 Misy fanazavana amin’ny an-tsipiriany ao amin’ny Mifohaza! Desambra 2010, pejy 14-19.